Tobanka Laptop Ee Ugu Batariga Fiican 2016 - Daryeel Magazine
Sababaha ugu muhiimsan ee laptop lagu xusho waxaa ka mid ah cimriga batariga, Dad badan ayaa ku dhib qaba batariga dhakhso dhamaanaya. Shirkado badan ayaa bilaabay inay soo saaraan laptop yo daba hayn kara mudo dheer.
Qormadaan waxan ku eegi doonaa laptop yada leh batari cimri dheer:
laptop-ka ThinkPad X260 ee ay soo saarto shirkadda Lenovo waxa uu dabka hayn karaa mudo 17 saacadood ah. Maalintii oo dhan ayaad ku shaqayn kartaa waana khafiif oo meel kasta ayaad u qaadan kartaa.
Waxa uu leeyahay botoomo aad u fiican waxaana uu dabka hayn karaa 17 saacadood.
Waa laptop aad u raqiis ah, waxaana uu dabka hayn karaa mudoo 14 saacadood iyo 45 daqiiqo ah
Waxaa uu dabka hayn karaa 14 saacadood, waxaa ku jira barnaamijyo badan oo tayo leh. Ballaca shaashadiisu 13 inch.
Qoloftiisa kore waxay ka samaysan tahay karboon waana sababta uu fududyahay. Waxaa uu leeyahay awood badan howl-gudasho fiican Cimriga batarigiisu waa 13 Saacadood.
Waa laptop kii ugu horeeyay ee ay soo saarto shirkadda caanka ee Microsoft, waxa uu leehay awood badan, xawaarihiisana aad ayuu dheereeyaa. Surface Book cabirka shaashaddiisu waa 13.5 Inch, Waxaa uu dabka xejin karaa 12 saacadood iyo bar.
Cimriga batarigiisu waa 12 saacadood
RAM kiisa waa 8 GB ah qaadkiisa guduhu (Internal disk storage) waa 128GB, 12 saacadood ayuu dabka xejin karaa.
Ma ahan raqiis laakiin dabka waxa uu haynta 12 saacadood.
Aad ayuu jaban yahay qiimo ahaan, miisaankiisu 2.2 KG, dabkana waxaa hayn karaa in ka badan 11 saacadood.
Talooyin Kaa Caawinaya In Battery-ga Laptop-kaaga In Mudo Ah Ku Hayo Shirkadda HP Oo Soo Saartay Laptop ka Dunida Ugu Khafiifsan Waqtiyada Ugu Fiican In Bunka La Cabo Sidee Uur Lagu Qaadi Karaa? Waqtigee Se Ugu Fiican?